"Paul Biya waxaan kuugu baaqayaa is casilaadaada" - TELES RELAY
ACCUEIL » SIYAASADDA "Paul Biya waxaan kuugu baaqayaa is casilaadaada"
"Paul Biya waxaan kuugu baaqayaa is casilaadaada"
Fal-celinta ayaa sii socota inay dhacaan kadib farriinta madaxweynaha ee maanta oo ah 10 sebtember 2019. Nambarka 2 ee MRC ayaa ka hadlay halkaas mana ka helin wax muhiim ah khudbaddaan Madaxa Qaranka. Kaliya wuxuu doonayaa isaga inuu guntiga u dhigo. Lebledparle.com waxay bixisaa qoraalka buuxa ee Mamadou Mota.
Mamadou Mota - sawir qaadid
« Khudbaddii shalay ayaa ah wax aan ka badneyn sigaar cabidda dadka oo uu ku dhawaaqay madaxweyne gebi ahaanba laakiin si qotodheer uga go'an xaqiiqada dalkiisa iyo dadkiisaba.
Paul Biya wuxuu dadka dunida tusay shalay inuu hurdo yahay, kan ah kan cadaalad ku dhaqma. "Waxaan baray caddaaladda siideynta dadka 209"
Wuxuu muujiyey inuusan dooneyn inuu wadahadal la yeesho: laakiin markaa yaa la hadlaya? Si kastaba ha noqotee wuxuu wali u diraa PM si uu u cuno cunnada qalbiga leh ee Fru NDI. Marka yaa Dion la hadli doona?
Biya waxay rabtaa inay xidho dhamaan qurbaha. Ma hanjabi karo oo wuxuu weydiisan karaa inay yimaadaan oo hadlaan.
Paul Biya wuxuu ku hanjabay shalay inuusan tuurin midhihii ugu horreeyay ee wadahadal daacad ah.
Wuxuu dib u soo celiyay dadaalkiisii ​​laakiin, run ahaantii, dadaalada noocee ah ayaa ka dhashay natiijooyinka? Waxaan filayay warbixin la taaban karo oo ka timid Komishanka Musongue, oo ah tiro aan la xaqiijin karin oo garsoorayaasha Ingiriiska ku hadla oo ka shaqeeya maxkamadaheena kala duwan. Tirada iskuulada laga furay NoSo.
Paul Biya waa inuu ogaadaa in dhiiggu ku daatay si ku filan oo wadahadal daacadda ah, ma jiro wax taban oo dastuuri ah, dhamaan mowduucyada waa inay miiska saaran yihiin.
Dhalintu waxay ku dhintaan NoSo, haddii aan waxna laga qaban sannadihii 3 waxaan yeelan doonnaa dhalinyaro badan oo Kameruun ah maxaa yeelay ciidanka jamhuuriga ayaa khaladaad samaynaya
Isaga oo xusaya isu-dheelitirka gobolka, Paul Biya wuxuu shaaca ka qaaday aragtida qabiileed ee dowladiisa Isku dheelitirka gobolka waa ceeb iyo aflagaado sirdoonka dadka reer Cameroon.
Paul Biya waxaan kuugu baaqayaa is casilaadaada, in dowladaada iyo dhamaan qaab dhismeedyadan dilaaga ah ee dila Cameroon ".
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.lebledparle.com/actu/politique/1109260-mamadou-mota-paul-biya-j-en-appelle-a-votre-demission
Ayaa noqon doona hogaamiyaasha ganacsatada ee loo soo bandhigi doono Shirka Ruushka iyo Afrika ee Sochi? - YoungAfrica.com
7 November 16 2019 Wargeys - VIDEO
Dabaaldeggii Maouloud ee Timbuktu: Dabaaldeg gaar ah oo cibaado leh
#Teaser: Poison Mobutu Feather feat Ipupa Ba ayaa xaqiijiyay Buzoba ya Héritier Wata: TALA IPHONE OYO - VIDEO
Video dheeraad ah3,509